Kuleylka ayaa dhalaaliya Mallorca | Saadaasha Shabakadda
Maalmihii ugu dambeeyay ee Julaay iyo kowda Agoosto waxay si gaar ah ugu kululaanayaan jasiiradda Mallorca oo dhan. Heerkulka in kasta oo maalintii ay aad u sarreeyaan, haddana habeenkii, oo ah goorta ay habboon tahay in la tuuro, haddana kuma filna.
Qiyamkee ayaan ka hadlaynaa? Qaar ka mid ah oo dhalaalay jasiiradda maalmo yar: 36, 39 darajo ... Waxay xitaa gaareen 41ºC. Laakiin tan ugu xun maahan taas: qoyaanku aad ayuu u sarreeyaa, qiyaastii 70%, taas oo keenta in dareenka kuleylku uu dhowr darajo ka sarreeyo.
Waan ku jirnaa muddada wareegga tanna waxaa laga dareemay qaybo badan oo Isbaanishka ah, gaar ahaan qaybta koonfureed ee Jasiiradda Iberia iyo jasiiradaha Balearic. Waxaan qarka u saaran nahay inaan gaarno bartamaha xagaaga waxaana horay u soo marnay labo hirarka kuleylka, iyo dhacdo kulul oo muujinaya naxariis la'aan Mallorca.
Wakaaladda Saadaasha Hawada ee Gobolka waxay haysaa digniinta liinta ee halista heerkulka illaa 39ºC ee gudaha iyo waqooyi-galbeed ee jasiiradda, iyo digniinta jaallaha ah ee halista heer kulka illaa 37ºC inta hartay. Xaalad socon karta illaa Axadda, maalinta ugu badnaan la filayo inay hoos u dhacdo ugu yaraan 4 darajo marka loo eego kuwa hadda la diiwaangelinayo.
Ilaa hadda, heerkulka ugu sarreeya ee rikoodhka ayaa ah:
Palma, Jaamacadda: 40,3ºC
Kuwa ugu yar ayaa sidoo kale aad u sarreeyay: tusaale ahaan, Jaamacadda Palma ma diiwaangelin wax aan ka badnayn ama ka yar 24ºC, iyo Sierra de Alfabia (Bunyola), waxay lahaayeen 23ºC. Taasi waa waxaa jira habeeno kuleyl ah, Maaddaama meerkurigu ka sarreeyo 20ºC. Laakiin waxa ugu yaabka badan ayaa ah in habeenkii 1-da Agoosto meelaha qaarkood ay ka diirimaad ahayd maalintii oo dhan kahor: ka sarreysa 35ºC, sida ay daabacday AEMET de Baleares Twitter.
Sawirka - Diariodemallorca.es
Nasiib wanaagse, xaaladdu xoogaa wey sii fiicnaan doontaa maalmaha soo socda. Laakiin haddii aad jasiiradda ku sugan tahay, taxaddar oo naftaada ha u dhigin qorraxda inta lagu jiro saacadaha dhexe ee maalinta iyo wax ka yar oo aan lagaa ilaalin 😉.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Kuleylka ayaa dhalaaliya Mallorca